Wafti Sare oo Uu Horkacayo Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar Ayaa Kormeer Kutagay Qaar Kamida Mashaariicaha Horumarineed ee Gobolka Sitti. - Cakaara News
Wafti Sare oo Uu Horkacayo Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar Ayaa Kormeer Kutagay Qaar Kamida Mashaariicaha Horumarineed ee Gobolka Sitti.
Shiniile(CN) Talaado.Jan.27.2015, waftigan balaadhan oo usigu jiray madax heer federaal ah iyo kuwa heer deegaan ayaa saaka kasoo baxay magaalada Diridhaba islamarkaana booqday oo soo indha indheeyay mashaariicaha horumarineed ee kasocda gobolka Sitti.
Waftigan sare ee heer fedraal oo uu horkacayo madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa kamid ah madaxa tababarka hogaaminta EPRDF ahna Directorka gudiga taageerada gaarka ah mudane Adhisu Lagase, Lataliyaha raysal wasaaraha ee arimaha nabadgaliyada qaran mudane Tsegaye Brehe, wasiirka arrimaha federaalka mudane Shiferew T/mariam, iyo wasiiro kale oo kasocda xafiisyada horumarka ee beeraha, waxbarashada iyo caafimaadka.
Madaxwaynaha iyo wafitigan heer fedraal ayaa sidoo kale waxaa kuwahelinayay madax heer deegaan ah oo ugu horeeya madaxwayne kuxigeenka mudane C/xakiim Cigaal Cumar iyo masuuliyiin kale.
Hadaba waftigan sare ayaa maanta indha-indhayn kusamaynaysay mashaariicaha kala duwan ee kasocda gobolka waxaana ugu horayntii uu waftigu dul joogsaday islamarkaana kormeeray mashruuca waraabka ee Harawo oo katirsan degamada Shiniile ee gobolkaasi Sitti.
Sidoo kale waxaa uu waftigu soo maray goobo badan oo ay kamid ahaayeen mashaariicda waraabka iyo biyo galinta ee tuulada Gabi ee degamada Hadhagaale taasoo wafigu gaadhay mashruuca Kulan ee waraabka iyo biyo galinta.
Mashaariicahan oo meel fiican maraya iyadoo ay shacabka deegaanadaasi aad usoo dhawaynayeen waftiga iyo waxqabadaka dawlada islamarkaana sheegay inay aad uga mahad celinayaan. mashaariicdan ayay bulshada sheegtay inay arkeen faaiidadooda aadna ay ugu baahnaayeen. Qaar kamida xubnihii waftiga sare ayaa bulshda kuboorinayay in ay kafaaiidaystaan wax-qabadkan oo ay ilaashadaan horumarka ay dawlada deegaanka iyo tan federaalkuba wadaan.
Waftiga ayaa galabta soo gaadhay magaalada Diridhaba kadib markii ay soo indha idheeyeen gooba katirsan gobolkaasi Sitti oo ay mashaariicuhu kasocdaan. Ma aha markii ugu horaysay ee ay waftigan oo kale u yimaadaan deegaanka Soomaalida Itoobiya kormeer hawleedkan lagu daraasanayo mashaariicaha horumarineed ee deegaanka. Waxayna tani kamid tahay gudashada waajibaadka shaqo ee haayadaha fedraalka iyo deegaanka oo astaan u ah maamulka suuban iyo xoojinta horumar waara.